Nikela madio ara-barotra
Lohahevitra simika Ni ny lohahevitra voarakotra ao ambadiky ny fiarovana fanoherana ny lozam-pifamoivoizana amin'ny fanamboarana nikela madio ara-barotra amin'ny famokarana nikela. Fanoherana ny harafoana noho ny nikela madio ...
Fahatakarana ny firaka amin'ny aliminioma
Miaraka amin'ny fitomboan'ny aliminioma ao anatin'ny indostrian'ny fanamboarana lasitra, ary ny fanekena azy ho safidy tsara amin'ny vy ho an'ny fampiharana maro, dia mitombo ny takiana ho an'ireo izay tafiditra amin'ny famolavolana tetikasa aluminium mba hahafantaran'izy ireo kokoa an'ity vondrona fitaovana ity. Ho feno ...
Aluminium: Famaritana, fananana, fanasokajiana ary kilasy
Ny aliminioma no vy be indrindra eran'izao tontolo izao ary singa fahatelo fahita indrindra ahitana 8% amin'ny tany. Ny fahaizan'ny aluminium dia mahatonga azy io ho vy be mpampiasa indrindra aorian'ny vy. Ny famokarana Aluminium Aluminium dia avy amin'ny bauxite mineraly. Ny bauxite dia navadika ho alumin ...
Tombontsoa sy fatiantoka firaka feCrAl
Ny firaka FeCrAl dia mahazatra amin'ny sehatry ny fanamafisana herinaratra. Satria misy tombony be dia be, mazava ho azy fa misy fatiantoka ihany koa, avelao handalina azy. Tombony: 1, Avo ny mari-pana fampiasana amin'ny atmosfera. Ny hafanan'ny serivisy farafahakeliny amin'ny firaka HRE amin'ny alim-bolan'ny alim-by-chromium-aluminium dia mety rea ...
Tankii News ： Inona no atao hoe resistor?
Ny resistor dia singa elektrika mandehandeha hamorona fanoherana amin'ny fikorianan'ny herinaratra. Saika ny tambajotra elektrika sy ny tariby elektronika rehetra dia hita izy ireo. Ny fanoherana dia refesina amin'ny ohm. Ny ohm dia ny fanoherana mitranga rehefa mandalo ...
Ahoana no haharetan'ny fantsom-piramirana lava kokoa?
Raha ny marina, ny vokatra fanafanana herinaratra tsirairay avy dia manana ny androm-piainany. Vitsy ny vokatra fanamafisana herinaratra afaka mahatratra 10 taona mahery. Na izany aza, raha ampiasaina sy voatazona tsara ny fantsom-pandrefesana dia maharitra kokoa noho ny mahazatra ny fantsom-panazavana. Avelao i Xiao Zhou hampahafantatra azy anao. , Ahoana ny fomba hanaovana ny radian ...
Ireo singa fanafanana, Bayonet Heater, Bayonet Heating Heating, Wire fanoherana, Open Coil Heater, Nickel Wire,